Ogaden News Agency (ONA) – 7ba Qarni ka dib Daldalidii William Wallas Iyo Hamigiisii oo Shalay ay Shacabkiisii Maya Dhaheen (Daawo)
7ba Qarni ka dib Daldalidii William Wallas Iyo Hamigiisii oo Shalay ay Shacabkiisii Maya Dhaheen (Daawo)
Waxaa aad looga qorayaa maqaalo taariikhda shacabka Scotland gaar ahaan halyayga ay ku dhaartaan ee William Wallace iyo dagaalkii uu lagalay boqortooyada Ingriiska suu uga xoreeyo dalkiisa taajka Ingriiska. Kacaankaa oo hadda ay kasoo wareegatay 7ba qarni ayaa shalay kusoo afjarmay aftidii loo qaaday in ay aqlibayadii u codeeyeen Maya. Hasa ahaatee lama odhan karo hadda Scotland gumaysi ayay ku jirtaa, oo xisbiyadii u ololaynayay goosashada Scotland doodooda ma’ahayn waxaan ku jirnaa Gumaysiga Ingriiska ee waxay ku doodayeen inay noloshooda ka fiicnaanyso hadday u madax-banaanaadaan masiirkooda siyaasi iyo dhaqaale. Marka dadka waxay kala dooranayeen ma’ahayn Xornimo iyo Gumaysi ee waxay ahayd nolosha aan hadda ku jirno anagoo ka mid ah Midowga Borotooyada (United Kingdom) maka fiicnaan doonaa hadaan gooni isu taagno oon noqono dawlad ka madaxbanaan.
Hadaan usoo noqono taariikhda halyaygan William Wallace, dardaarakiisii ugu dambeeyay uu siiyay wiilkiisa markii madaxa laga goynayay waxay ahayd;
-Hadalkan aan kuu sheegayo waa run: waxkastoo la barabardghigo, Xoriyadda ayaa ugu fiican. Marna ha ogolaanin inaad inaad ku noolaato adoonnimo.- (“This is the truth I tell you: of all things freedom’s most fine. Never submit to live, my son, in the bonds of slavery entwined.” William Wallace –.
Dadweynaha Scotland aad ayay u qadiriyaan halyaygan aan is-dhiibin ilaa laga soo qabto oo qoorta laga gooyo isagoo diidan inuu ku hadlo ereyo jilicsan oy ka muuqdaan argagax iyo inuu isdhiibo oo cafis ka dalbado boqorka Ingriiska. Kutubta taariikhda ee laga qoro William Wallace ayaa ah kuwa labaad ee loogu gadasha badan yahay dalka Scotland, meesha taariikhda Ingriiska uu ka yahay William Wallace shufto, dilaa ah iyo khaa’in hogaaminayay kacdoon sharcidarra ah.
1296kii ayaa laqabsaday Scotland ka dib markii ay xukunka isku qab-qabsadeen qoysaskii xooga badnaa ama (Scots nobles). Ka dib boqorkii Ingriiska oo ka faa’idaysatay arintooda ayaa kusoo duulay oo xabsiga wada dhigay.
1297kii ayuu William Wallace wuxuu qoorta ka gooyay ninkii masuulka uga ahaa Ingriiska dalka Scotland, halkaa ayuuna ka bilaabay kacdoon uu dhiig badan ku daadatay oy beeralaydii Scotland ay wada raaceen iyagoo u adkaysan waayay canshuurihii xad dhaafka ahaa ee Ingriiska uu saaray oo dagaal kula jiray boqrkii Faransiiska. Muddo yar gudaheed ayay isaga iyo dalinyaradii la socotay kuwada xoreeyeen dalkii Scotland, halkaasoo uu dagaal adag ku dhex maray iyaga iyo ciidanka Ingriiska.
Dagaalka markuu aad usii xumaaday ayuu Wallace wuxuu 1299kii taageero u doontay boqorkii Faransiiska, hasa ahaatee muddo yar kadib way ka goosteen taageeradii ay u fidnayeen halkaa ayuuna ku dhamaaday oo lagaga adkaaday. 1304kii ayay iswada dhiibeen madaxdii la socotay hasa ahaatee isaga wuu diiday inuu isu dhiibo xukunkii Ingriiska oo ciidan badan daba dhigay ilaa ay kasoo qabtaan 1305tii. Waxay usii qaadeen London oo maxkamad ay ku xukuntay inuu ku caasiyay boqorka, waxaana lagu xukumay in la daldalo, ka dibna madaxa laga gooyo oo jidhkiisana la jarjaro. Wuxuu diiday inuu Cafis dalbado oo yidhaahdo ereyga ah – Mercy ( ii naxariista)-, ereygii ugu dambeeyay uu yidhhado waxay noqotay Freedom – Xoriyo, kolkaa oy qoorta ka gooyeen.
Dadweynihii Scotland wuxuu u noqday halyay ay ku daydaan, halkii ayayna kasii wadeen diidmadii iyo kacdoonkii. Ugu damban 23sano ka dib dilkii William Wallace ayay Ingriiska iyo Scotland kala saxiixdeen heshiiska loo yaqaano Heshiiskii Edinburgh 1328kii oy kaga id noqdeen iyagoo xor ah Midowga United Kingdom.
Laga bilaabo waqtigaa William Wallace wuxuu ahaa Halyay taariikhda Scotland ku leh ixtiraam.